Fiarovana an-dranomasina amin'ny lalana Seychelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fiarovana an-dranomasina amin'ny lalana Seychelles
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny firenena kely indrindra eto Afrika dia mametraka fenitra ho an'ny ranomasina maharitra azo antoka amin'ny alàlan'ny fanenjehana ireo jiolahin-tsambo, fiaraha-miasa iraisam-pirenena ary ny fepetra mihetsika hiarovana ny faritra ara-toekarena natokana ho azy.
Raha natory teny amin'ny ranomasina atsimo atsinanan'ny Nosy Mahé ireo mpiasa an-tsambo Seychellois enina tao amin'ny sambo mpanjono Galate, dia tokony ho kely fotsiny ny natahorany noho ny mifoha amin'ny andro iray hafa feno fisamborana tuna avy amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Ireo bandy mitam-piadiana kosa dia nanenjika ny rano. Ny fisafoana an-dranomasina iraisam-pirenena dia nanosika jiolahin-tsambo an-jatony kilaometatra avy teo amin'ny morontsirak'i Somalia sy ny Hoalan'i Aden. Ankehitriny ny sasany amin'ireo jiolahin-tsambo ireo dia nijery ny mpanjono.
Tokony ho tamin'ny 2 ora maraina ny 30 martsa 2010, piraty somalianina sivy, vao tsy ela akory izay, nanana fananana fanjonoana iraniana sy ireo mpiasa 21 ao aminy, no nitady hanampina ny Galate. Voasambotry ny jiolahin-tsambo ny asa-tanin'i Iran efatra andro talohan'izay, araka ny tatitra navoakan'ny News.
Tamin'ny fotoana nidiran'ny jiolahin-tsambo Somalia tamin'ny Galate, dia efa nanafika sy nisambotra ekipa Serenity, Ocean Ocean Explorer ary Alakrana ny jiolahin-tsambo. Tapa-kevitra ny filoha James Michel avy eo fa tsy hisy amin'ny olony intsony ny hanao varotra varotra ho an'ny jiolahin-tsambo any Somali.
Nandidy ny sambo mpiambina amoron-dranomasina Seychelles Topaz hisakana ny dhow, izay manintona ny Galate, ary hisorohana ny hahatongavany any Somalia. Raha tsy nahomby ny Topaz, dia fitsapana maharitra sy mampidi-doza hafa iray ihany koa ny fiarovana ny famotsoran'ireo ekipazy no saika hanaraka.
Miaraka amin'ny fanampian'ny Aircraft Eritre Patrol Aircraft eropeana, hitan'ny Topaz ilay tranony ary nanapoaka basy fampitandremana izy. Avy eo, nitifitra ny motera dhow ny Topaz, nanala ny sambo ary nampirehitra azy. Nitsambikina tany anaty ranomasina ireo jiolahin-tsambo, Iraniana ary Seychellois mpanjono ary avotra. Rehefa niverina nody izy dia tsy maintsy nanohitra fanafihana jiolahin-tsambo iray hafa ny Topaz, nitifitra ary nilentika sambo sy sambo reny. Sambo iray hafa no tafaporitsaka.
"Tsaroantsika rehetra ny fanaintainana sy ny tsy fahazoana antoka raha ny mpiray tanindrazana ao amin'ny Serenity, Indian Ocean Explorer ary Alakrana dia nataon'ireo jiolahin-tsambo takalon'aina tamin'ny taon-dasa," hoy i Michel taorian'ny zava-nitranga tany Galate, hoy ny vaovao voaray. “Tapa-kevitra izahay fa tsy hiverimberina ny trangan-javatra toy izany, ary zava-dehibe ny tsy famelana ny sambo hiditra any Somalia.”
Tao anatin'ny taona maro taorian'ny tranga Galate, Seychelles no nitarika ny fampanoavana sy ny fanagadrana ireo piraty tatsy Afrika Atsinanana, fanamafisana ny mpiambina amoron-dranomasina kely, fanaovana sonia fifanarahana sy fifanekena amin'ireo fahefana vahiny, ary hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny faritra an-dranomasina midadasika. . Mandaitra ny asa. Ny firenena kely indrindra eto Afrika dia mametraka fenitra ho an'ny kaontinanta.
Ny Seychelles dia vondronosy nosy 115 misy velaran-tany mitambatra 455 kilometatra toradroa, saingy tsy maintsy miaro faritra ara-toekarena manokana amoron-dranomasina 1,336,559 kilometatra toradroa - faritra lehibe kokoa noho i Afrika Atsimo. Ny Seychelles sy ireo mponina 90,000 ao aminy dia manana ahiahy amin'ny resaka fitaterana an-dranomasina izay tena manaloka ireo firenena im-betsaka ny habeny sy ny isan'ny mponina ao aminy.
Rehefa nitombo ny piraty sy ny fandrahonana an-dranomasina hafa tany amin'ny Ranomasimbe Indianina, dia nahazo tombony ireo Seychelles avy amin'ireo mpitarika mieritreritra mialoha vonona hiaraka amin'ireo mpiara-miasa iraisampirenena. Ny haben'ny firenena sy ny jeografia kely dia kely ihany koa dia nanampy, hoy ny Dr. Ian Ralby, mpampianatra momba ny lalàna an-dranomasina sy ny fiarovana eny amin'ny Ivotoerana Africa for Studies stratejika.
"Amin'ny lafiny sasany, ny habeny dia manome azy ireo tombony amin'ny hakingan-tsaina," hoy i Ralby tamin'ny ADF. “Mora kokoa ny manova zavatra sy manova ny fomba fiasa rehefa olona 90,000 ianao fa tsy olona 200 tapitrisa.”
Na izany aza, ny haben'ny Seychelles dia manitatra ihany koa ny vokatry ny piraty sy ny fandrahonana hafa. Ny fandrahonana ho an'ny indostrian'ny jono na fizahan-tany dia tsapan'ny firenena manontolo. Tsy safidy ny tsy firaharahana ny olana.
Ny Seychelles dia mandray soa ihany koa amin'ny fisehoana miavaka hafa. Dr. Christian Bueger, tao amin'ny taratasy niara-nanoratra tamin'i Anders Wivel tamin'ny Mey 2018, dia nametraka ity fanontaniana ity: "Ahoana no ahaizan'ny firenena iray manana harem-pirenena sy manam-bola voafetra toy izany ho lasa mpanelanelana diplomatika lehibe ary iray amin'ireo fandaharam-potoana mpiorina amin'ny fitantanana ranomasina? ”
Ny tsiambaratelo, hoy i Bueger tamin'ny ADF, dia tafiditra ao amin'ny tantaram-pirazanana sy kolontsaina ao amin'ny firenena.
VOLOTRA DIPLOMACIA Miavaka
Ny Seychelles dia tsy manana kolotsaina na mponina ao aminy. Raha ny marina dia tsy nisy mponina mihitsy raha tsy tamin'ny taona 1770, rehefa tonga ny mpamboly frantsay, nitondra andevo Afrikanina Tatsimo niaraka tamin'izy ireo. Ny mponina maoderina ao amin'ny firenena dia ahitana ny taranaky ny zanatany frantsay, afrikanina ary britanika, ary koa ny mpivarotra afrikanina, karana, sinoa ary afovoany atsinanana izay nonina tamin'ny nosy lehibe telo - ny ankamaroany tao Mahé, ary ny kely kokoa amin'ny Praslin sy La Digue.
Nanoratra i Bueger sy Wivel fa ny andevo dia natakalon'ny olona tsirairay fa tsy vondrona na fianakaviana, ka tsy voatahiry ny kolontsain'izy ireo. Tamin'ny firongatry ny firenen-kafa avy any Atsinanana sy Andrefana, dia lasa firenena kreôla ny Seychelles. Io fifangaroana kolontsaina io, tsy misy fanoloran-tena matanjaka amin'ny iray amin'izy ireo, dia mahatonga ny Seychelles hahay tsara amin'ilay antsoin'i Bueger hoe "diplomatie Creole."
"Amin'ny diplaomasia kreôla, manana sakaiza marobe ianao, tsy misy fahavalo, ary miresaka amin'ny rehetra ianao, ary mety ho pragmatika be ianao amin'ny fanaovana izay hahatonga ny zavatra hiasa fa tsy hanana olana ara-potokevitra na ara-tantara be loatra," hoy i Bueger, profesora an'ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny University of Copenhagen. “Ny pragmatisme, ny fisokafana amin'ny karazan-kolontsaina sy firenena hafa - fotom-pinoana kreôla io; izany no fiasan'ny kolontsaina kreôla. ”
Ny governemanta Seychellois dia miara-miasa amin'ny firenena sy fikambanana isan-karazany amin'ny raharaham-pirenena an-dranomasina. Niara-niasa tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena hiadiana amin'ny asan-dranomasina izy, nandray anjara tamin'ny fanazaran-tena an-dranomasina iraisam-pirenena ary nanao fifanarahana roa tonta tamin'ny firenena vahiny mba hanamafisana ny fahaizany miofana sy miserana amin'ny alàlan'ny fahazoana harena an-dranomasina sy rivotra. Ohatra vitsivitsy:
Tamin'ny 2014, ny Vondron Eropeana (UE) dia nanolotra rindrambaiko fandinihana sidina sy fandalinana sary any Seychelles ary nampianatra ireo manamboninahitra hampiasa izany. Ny rafitra dia manampy ny Air Force hanara-maso ny sehatra an-dranomasina ary handinika tsara ny sary radara, horonan-tsary ary infrared, hoy ny fitantaran'ny defenceWeb. Ity fahaiza-manao ity dia manampy amin'ny fanomezana porofo azo ekena amin'ny fanenjehana piraty.
Tamin'ny 2015, ny Seychelles no nanjary firenena isam-paritra voalohany nitantana ny Vondrona Fifandraisana momba ny Piraty any amin'ny morontsirak'i Somalia, nanompo nandritra ny roa taona. Ny mpandray anjara dia mandrindra ny ezaka ara-politika, ara-tafika ary tsy miankina amin'ny fanjakana hiadiana amin'ny piraty Afrikana Atsinanana ary hiantohana fa hatolotra ny fitsarana ny piraty. Firenena efa ho 80 sy fikambanana iraisam-pirenena maro no mandray anjara.
Ireo Sailors Alemanina ao amin'ny FGS Bayern, sambo mpiadidy ny firenena ao amin'ny fiaramanidina mpiaro ny vondrona Opérationale Atalanta an'ny vondrona eropeana EU, dia nampiofana ny Vondron'ny Polisy an-dranomasina Seychelles tamin'ny taona 2016 tamin'ny fiakarana, hahazoana zona fiantsonana sy ady amin'ny haintrano, hoy ny defenceWeb.
Tamin'ny volana Janoary 2018, ny Seychelles no firenena nampiantranoina ho an'ny Cutlass Express, fampiharana ny tafika atsinanana amerikana atsinanana amerikanina. Ireo firenena mpandray anjara dia nanandrana ny fahafahany miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko, piraty, jono tsy ara-dalàna ary manao hetsika fikarohana sy famonjena. Ireo mpandray anjara dia avy any Aostralia, Kanada, Kaomoro, Danemarka, Djibouti, France, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, New Zealand, Seychelles, Somalia, South Africa, Netherlands, Turkey ary Etazonia.
Ny Seychelles People's Defense Forces (SPDF) sy ny tafika Indiana dia nanatevin-daharana ny volana feb 2018 mba hanao fampihetseham-batana valo andro antsoina hoe Lamitye, teny kreôla momba ny finamanana. Ny sekretera SPDF Lt. Col Jean Attala dia nilaza tamin'ny Seychelles News Agency fa ny fampihetseham-batana roa taona, nanomboka tamin'ny 2001, dia manamafy ny fanoherana ny hery roa tonta, ny asa fampihorohoroana ary ny asa fanoherana ny piraty. Tafiditra tamin'ny mpiasan'ny SPDF, Coast Guard ary Air Force.
MPITARIKA AMIN'NY FAMPANDROSOANA
Sehatra iray niavaka ny Seychelles dia ny fahavononany hanenjika ireo piraty tratra nanafika sambo avy any amin'ny morontsirak'i Somalia sy ny sisa. Rehefa nanomboka nanafika ny jiolahin-tsambo tany amin'ny Helodrano Aden sy ny Ranomasimbe Indianina ny tafika an-dranomasina, dia nanao "fisamborana sy famotsorana" izy ireo satria ireo firenena mpandray anjara dia tsy vonona ny hanenjika ireo piraty tany amin'ny fireneny.
"Mba hiatrehana izany dia niasa tamin'ny vahaolana ny fianakaviambe iraisampirenena mba hisamborana olona ahiahiana, nefa natolony an'ireo firenena isam-paritra mba hanenjehana," hoy i Bueger sy Wivel nanoratra.
Niakatra voalohany i Kenya, ary avy eo nanaiky ny hanenjika ireo jiolahin-tsambo ny Seychelles ary vetivety dia lasa fanjakana isam-paritra voalohany nitantana ny raharaha. Nanandrana tranga am-polony nanehoana olona maherin'ny 100 izy ireo ary efa niatrika raharaha fitarainana maro ihany koa. Nandritra ny lalana rehetra, ny firenena dia nitoetra mafy tamin'ny fifikirany tamin'ny lalàna velona.
Tamin'ny voalohany, hoy i Ralby, ny Seychelles dia tsy nanana fahefana ampy hanenjehana ireo tranga nipoitra teny amin'ny ranomasina avo na lalàna hiatrehana ny “fikasana piraty.” Izy ireo koa dia nitety ny làlan-kizorana niankina tamin'ny fitsipiky ny porofo toy ny manaporofo ireo ahiahiana fa mihoatra ny 18 taona na mamaly ireo fanontaniana momba ny zom-pirenena. "Rehefa nipoitra ny olana ara-dalàna, dia nanitsy ny lalàny tokoa izy ireo mba hahafahany mitantana tsara ny raharaha," hoy i Ralby. “Ka manana ny sasany amin'ireo manam-pahaizana ambony eto an-tany amin'izao fotoana izao izy ireo amin'ny lafiny mekanika amin'ny fakana tranga piraty na aiza na aiza - na aiza na aiza any amin'ny ranomasina avo - amin'ny fitsarana ary hatrany amin'ny fampanoavana, fanamelohana, fampiakarana raharaha ary fanagadrana azy . "
Ilay firenena bitika, any amin'ireo nosy afovoan'ny Ranomasimbe Indianina, dia nahita ny tombony azo avy amin'ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna amin'ny faritany an-dranomasina. Izy io koa dia nahita ny tombony azo avy amin'ny fanaovana ny ranomasina maharitra, ary koa azo antoka.
"Raha ny miaro ny fanjakana amin'ny fandrahonana fotsiny no mandrisika ny filaminana an-dranomasina dia manana olana mahakivy sy maharitra ianao, amin'ny fandanianao vola be amin'ny fampijanonana zavatra izay ho avy foana," hoy i Ralby. “Hisy hatrany ny fandrahonana vaovao; hisy hatrany ny fanamby vaovao momba ny fiarovana an-dranomasina. ”
JEREO NY SARY MARITIME LEHIBE
Ny Seychelles, angamba mihoatra lavitra noho ny firenena afrikanina hafa, dia mahalala ny sandan'ny toekarena miorina amin'ny ranomasina. Ny vola azo dia azo avy amin'ny indostrian'ny jono sy fizahan-tany, ary ny asan-jiolahy any amin'ny ranomasina. Rehefa miezaka ny firenena hahalala bebe kokoa ny sehatra an-dranomasina, nilaza i Ralby fa miasa tsy misy fitsaharana i Seychelles hiaro sy hamboly azy io ho loharanon'ny harena sy fanambinana.
Ny Seychelles dia manana politikam-pandehanana manjono izay mamela ny mpanjifa manerantany hahita ny niavian'ny tuna tratran'ny sambo mpanjono Seychellois. Ity mangarahara eo amin'ny tsena ity dia manome lanja ny fisamborana ara-dalàna ary manakana ny jono tsy ara-dalàna.
Nanomboka tamin'ny fomba vaovao iray ihany koa ny firenena amin'ny fitehirizana ny fari-dranomasina amin'ny fisotroan-dronono. Ny fandaminana ara-bola, fantatra amin'ny anarana hoe "trosa dolphins," dia nanokanan'i Seychelles ny velarantany midadasika ho fitehirizam-bola ho takalon'ny famatsiam-bola hisotro ronono nasionaly.
Tany am-piandohan'ny taona 2018, ny The Nature Conservancy dia nanolo-tena hividy $ 22 tapitrisa $ amin'ny trosan'ny Seychelles. Ho takalony, ny firenena dia hanondro ny ampahatelon'ny faritra an-dranomasina ho voaaro, hoy ny tatitra nataon'ny Reuters. Ny faritra fitahirizana 210,000 kilaometatra toradroa voalohany dia mametra ny jono, ny fitrandrahana solika ary ny fampandrosoana amin'ny toeram-ponenana marefo ary hamela azy ireo amin'ny toe-javatra sasany any amin'ny faritra sisa. Faritra 200,000 XNUMX kilaometatra toradroa fanampiny dia tokony hisy famerana hafa.
Ny Seychelles dia nanolo-tena hiaro hatramin'ny 30 isan-jaton'ny faritra an-dranomasina amin'ny alàlan'ny drafitra habakabaka an-dranomasina feno. Hiaro ny karazana sy ny toeram-ponenana ity drafitra ity, hanangana fiaretana amoron-tsiraka manoloana ny fiovan'ny toetrandro, ary hitahiry ny fotoana ara-toekarena amin'ny fizahan-tany sy ny jono.
"Ny toekarena manga dia nanjary votoatin'ny toekarem-pirenena, ary mihoatra ny mety ho fanjakana hafa rehetra, Seychelles dia nahatanteraka ny zava-misy ny jeografia ary nandray azy ho fanamby tsara fa tsy fanamby fotsiny," hoy i Ralby.
Source: Forum Fiarovana ao Afrika